Warbixinta cusub ee WTTC waxay bixisaa talooyin maalgashi oo loogu talagalay Safarka & Dalxiiska ee COVID kadib
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » Warbixinta cusub ee WTTC waxay bixisaa talooyin maalgashi oo loogu talagalay Safarka & Dalxiiska ee COVID kadib
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • saaciday inay • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Parks Theme • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Julia Simpson, Madaxweynaha WTTC & Maamulaha guud
Sida lagu sheegay warbixinta, dawladaha iyo meelaha loo socdo waa inay maalgashadaan oo ay soo jiitaan maalgashi laga sameeyo waaxda gaarka loo leeyahay meelaha sida kaabayaasha jirka iyo dijitaalka, iyo sidoo kale qaybaha socdaalka sida fayoobaanta, caafimaadka, MICE, waarta, xiisaha, dhaqanka ama bartilmaameedka - oo ay ku jiraan haweenku , LGBTQI, oo la heli karo - dalxiis.
Waaxda Socdaalka & Dalxiiska Caalamiga ah ayaa la kulmay dhibaato ka badan mid kasta oo kale sababtoo ah xaddidaadaha dhaqdhaqaaqa daran.
Ku -biirinta Safarka & Dalxiiska ee GDP -ga adduunka ayaa hoos uga dhacay ku dhawaad ​​$ 9.2 tiriliyan sannadka 2019 illaa $ 4.7 tiriliyan sanadka 2020.
Maalgashiga raasumaalka ayaa hoos uga dhacay $ 986 bilyan sanadka 2019 illaa $ 693 bilyan sanadka 2020.
Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka (WTTC) ayaa maanta bilaabay warbixin cusub oo muhiim ah oo siisa talooyin maalgashi dowladaha iyo meelaha loo safro, maaddaama ay hiigsanayaan dib -u -dhiska iyo kobcinta waaxdooda Safarka & Dalxiiska.
Iyada oo masiibada ay gebi ahaanba joojisay socdaalkii caalamiga ahaa, waaxda Socdaalka & Dalxiiska ee adduunka ayaa la kulmay dhibaato ka badan kuwa kale sababo la xiriira xannibaadaha dhaqdhaqaaqa daran.
Kaalintii qaybta ee GDP -ga adduunka ayaa hoos uga dhacday ku dhawaad ​​US $ 9.2 tiriliyan sanadka 2019, ilaa $ 4.7 tiriliyan sanadka 2020, taasoo ka dhigan luminta ku dhawaad ​​US $ 4.5 tiriliyan. Intaa waxaa sii dheer, markii masiibada ka dillaacday wadnaha waaxda, 62 milyan oo shaqooyin Socdaal & Dalxiis oo naxdin leh ayaa lumay halka qaar badanna ay weli halis ku jiraan.
Warbixintu waxay daaha ka qaadaysaa in maalgashiga raasumaalka uu hoos u dhacay ku dhawaad ​​saddex meelood hal meel (29.7%) sanadkii hore, isagoo hoos uga dhacay $ 986 bilyan sannadka 2019, illaa $ 693 bilyan oo keliya sannadka 2020 iyo hadda, markaan u jihaysanno soo kabashada, maalgashiga Safarka & Dalxiiska weligood sidaas ma noqon.
Tani WTTWaraaqda C waxay muujinaysaa sida ay muhiimka ugu tahay labada meelood iyo dawladahaba inay soo jiitaan maalgashiga iyada oo loo marayo bay'ad awood u leh oo wax ku ool ah, oo ay ku jiraan dhiirrigelinta sida cashuurta caqliga leh, siyaasadaha fududeynta safarka, kala -duwanaanshaha, is -dhexgalka caafimaadka iyo nadaafadda, isgaarsiin wax -ku -ool ah, iyo shaqaale xirfad leh oo tababaran.
Warbixintu waxay sidoo kale soo jeedinaysaa talooyin muhiim u ah dawladaha iyo meelaha loo socdo waxayna iftiiminaysaa qaybahaas oo aad u soo jiidan kara maalgashadayaasha.
Jean-Marie Delort wuxuu leeyahay,
September 17, 2021 at 04: 11
Waa cusub iyo toban sano oo cusub! Adduunyadu way is beddelaysaa waana inaan la qabsannaa isbeddeladaas. Nasiibdarro dhammaan dowladdu ma raacdo Isbeddellada. Safarradu waxay u socdaan raadinta 3S, ka hor waxay ahayd Badda, Qorraxda iyo Adeegga iyo maalmahan Dhoolacaddeyn, Ammaan, Waaritaan.